Galaxy yaTrian yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Pane dzimwe nguva, patinonyora chinyorwa tichizivisa nezve yemahara yemutambo kana kunyorera, musimudziri anogona kudzikamisa iyo yemahara nguva kana kushandura pfungwa dzavo nekushandura chishandiso kuitira kuti panzvimbo pekuwanikwa mahara kurodha pasi inosanganisirwa mukutenga-kwe-app yemutengo waive neapp kare. Ivo vanofara mukati me-app kutenga izvo zvinowanzo kanganisa ruzivo rwekutamba uye kuti vashandisi vazhinji vangave vanofara kudzivisa kubhadhara mutambo kana kunyorera kuti varege kutambura iyi nyowani yekuvandudza mutemo iri kupa mari yakawanda kune vanogadzira.
Pane ino chiitiko, iko kunyorera kwatinokuratidza nhasi iGreen yeTrian, mutambo unowanzo kuve nemutengo we4,99 euros asi isu tinokwanisa kuutora mahara zvachose. Girazi reTrian idhijitari bhodhi mutambo, uzere nemufaro uye neinoshamisira nhanho, zvichibva pane inozivikanwa uye inozivikanwa bhodhi mutambo wezita rimwe chete. Munguva yemutambo isu tinofanirwa kuvaka yedu giraidhi izere nemapuraneti masystem, nebulae uye ekare tekinoroji Munguva yekufamba kwemutambo isu tinofanirwa kukunda matunhu nekuvadzivirira kubva kuvavengi vedu. Kune izvi isu tinofanirwa kuvaka yakakura kwazvo zvivakwa kuunganidza zvicherwa kubva kune renyeredzi.
Galaxy yeTrian maficha
Yepamutemo Trian Galaxy mutambo, unosanganisira hwepakutanga hunyanzvi
Ingobhadhara kamwe uye tamba pane yako iPad kana iPhone
Vatambi vepamhepo vakawanda
Denha vamwe vatambi uye bvuma matambudziko ese aunoda
Tamba mu hotseat mode, ingo pfuudza iyo kifaa pakati peshamwari dzako
Nemaoko akavezwa akadhirowewa
Sevha kufambira mberi kwako mugore uye iwe unogona kuenderera nemutambo wako pane chero chimwe chigadzirwa
10 mishandirapamwe yemishinari
Mutambo mutambo mutambo; kutarisana nevatambi vatatu veAI
Asynchronous online mutambo modhi iwe yaunogona kutamba kunyangwe iwe uri mupfupi nenguva
Otomatiki Notices saka iwe ziva kana chijana chako
Unogona kutamba matambudziko ese aunoda panguva imwe chete
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Galaxy yaTrian yemahara kwenguva yakati rebei
Zvichiri zvemahara? Ndakaedza kuritsvaga asi rinondiudza kuti "chinyorwa ichi chava kuda kuchinja, edza futi gare gare"
Ndanonoka, zvakatobhadharwa zvekare